Ajụjụ ọnụ nke Luis Carbajo, onye isi oche nke SoloStocks.com | ECommerce ozi ọma
Ajụjụ ọnụ nke Luis Carbajo, onye isi oche nke SoloStocks.com
Luis Carbajo, CEO nke SoloStocks.com, na-agwa anyị gbasara ohere eCommerce nwere maka ụlọ ọrụ B2B yana ohere nke mba dị iche iche nke obere na ndị pere mpe nwere na ọnọdụ dị ugbu a.
Luis Carbajo abụrụla onye isi nke SoloStocks.com kemgbe etiti afọ 2012. Na mbụ, ọ rụrụ ọrụ dị ka Onye isi nke Azụmaahịa Ntanetị maka Europe na Vistaprint, onye ndu ụwa na ire ere ngwaahịa ntanetị maka SMEs (2010). Tupu ọnọdụ a, Carbajo nwere ọrụ njikwa dị iche iche n'ime Ngalaba Ọrụ, Ego na Ahụmịhe Ndị Ọrụ nke Amazon.com na US, ụlọ ọrụ nke ọ rụrụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ isii na ebe ọ ghọrọ onye isi ngalaba nke Ahụmịhe Onye Ọrụ n'ụwa niile. .
ECommerce ozi ọma: Maka ndị na-amatabeghị ya, na-eche ịwụba n'ahịa ịntanetị na / ma ọ bụ na-atụle ohere ịmekọrịta azụmahịa ha, kedu ka SoloStocks.com si arụ ọrụ?
Luis Carbajo: SoloStocks.com na-enye ọmarịcha ụlọ ahịa na ọrịre n'ịntanetị maka ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara. Anyị bụ ndị isi na Spain na ngalaba B2B (Business to Business) ma anyị nwere ọnụnọ mba ụwa siri ike, ọkachasị na Europe na Latin America. Anyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 2, site na ihe karịrị ndị ahịa 50.000 tụkwasịrị obi n'ụwa niile, nke na-ekwe nkwa nchekwa nke azụmahịa. Ya mere, anyị na-enye ndị SME na ndị nweere onwe ha ihe niile ha chọrọ iji nweta maka azụmaahịa ha, ebe anyị na-enye ha ọrịre nke ọma na nchekwa na ọwa nkwalite iji zụọ ngwaahịa ha na ịntanetị, ma ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Tụkwasị na nke a, n'ihi ọnụnọ anyị na mba ụwa na mmekọrịta anyị na ICEX Spain, ụlọ ọrụ nwere ike ree ngwaahịa ha na mba ọzọ n'ụzọ dị mfe ma dịkwa nchebe, na-enweghị mkpa maka akụrụngwa ọzọ ma hụ na ngwaahịa ha na-ahụ ọtụtụ ndị na-ege ntị karịa ka ha nwere ike ịbụ enweta site n'aka ndị ọzọ (SoloStocks.com na-enweta ihe karịrị eleta nde 3,5 kwa ọnwa n'ụwa niile, 2,5 na Spain).
AE: Kemgbe mmalite ya na 2000, SoloStocks.com ahụla nnukwu mmụba. Olee ihe ndị kpataworo uto a nke ukwuu? Kedu ihe bụ amụma maka ọdịnihu dị nso?
LC: Ahụmịhe enwetara n'ime afọ 15 ndị ​​a na itinye ego na teknụzụ na arụmọrụ ọhụụ iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ abụwo ihe kachasị emetụta uto anyị.
Ebumnuche anyị bụ ịkwado ndị isi anyị na Spain, na-aga n'ihu na-eto eto n'ahịa niile anyị na-arụ ọrụ (Brazil, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, France, Germany, Portugal, Italy, Poland na Morocco) na ịkwalite ndị ahịa mgbe niile. Ahụmahụ mere na ị na-enwe afọ ojuju na SoloStocks.com.
AE: Came bịara SoloStocks.com na 2012. Kedu mgbanwe ndị agbanweela usoro ikpo okwu kemgbe ahụ? Kedu ozi ọzọ ma ọ bụ mmelite ndị ọzọ ị na-eme atụmatụ itinye?
LC: Site na mgbanwe nke ụzọ, ọnụ ụzọ ahụ gbanwere usoro, na-aga site na ụdị ndekọ ndekọ B2B nwere akụkụ dị oke mkpa nke ego sitere na mgbasa ozi, na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ ụdị ecommerce. Kemgbe ahụ, ọ bụghị naanị na mgbasa ozi na-emerụ ahụ maka onye ọrụ belatara, mana etinyere ngwa ahịa ịzụ ahịa 100% na-enye ahịa maka ụlọ ọrụ na-eweta ngwaahịa na afọ ojuju dị ukwuu maka ndị na-azụ ahịa.
Na mgbakwunye, anyị emegharịrị ọnụ ụzọ na nkwukọrịta anyị niile na-eto eto site na mobiles na mbadamba. Dịka nsonaazụ, anyị nwere weebụsaịtị wepụtara n'okpuru usoro nhazi atụmatụ (Ntugharị Weebụ Web), nke na-enye ohere ka ọrụ niile bụrụ ezigbo mgbe ịnweta SoloStocks.com site na ụdị ngwaọrụ ọ bụla. N'aka nke ọzọ, n'afọ a, anyị arụ ọrụ iji melite ọnụnọ nke ụlọ ọrụ ndị na-ebubata ngwaahịa n'ime SoloStocks.com, na-enye ha nhọrọ nke ịnweta weebụsaịtị zuru oke na nke ahaziri iche n'ime ikpo okwu anyị.
Na, na-ele anya n’ọdịnihu, anyị nwere ọtụtụ nsogbu, dịka ịga n’ihu na-enyere ụlọ ọrụ ndị Spen aka ibupụ mba ọzọ ma melite usoro iji nye ndị na-azụ anyị atụmatụ dịka mmasị na mmasị ha si dị.
AE: Gini bu uche gi, ihe ndi emere SoloStocks.com onye ndu na akara ngosi nke ire ahia na ahia ahia ahia?
LC: Dịka m kwuru na mbụ, nkwado nke afọ 15 nke ahụmịhe na mmepe na-aga n'ihu emeela ka uto anyị na ọnọdụ anyị, ma ọdịnaya na ndị na-ege ntị na ihe ọmụma ahịa.
Tụkwasị na nke a, ọ dị mkpa iburu n'uche na ruo ogologo oge, anyị bụ naanị ọnụ ụzọ amaala ọkachamara na B2B, nke mere ka anyị nwee ikeiche onwe anyị nke ukwuu site na ndị asọmpi nwere ike iji atụmatụ ndị ahịa, yana ndị ọzọ na-asọmpi mba ụwa. enweghị nghọta miri emi nke ahịa Spanish anyị nwere.
Na mgbakwunye, n'ihi ọrụ nke ndị otu ahụ dum, ọkachasị mpaghara teknụzụ, nhazi ngwaahịa na mmepe yana ịjụ azụmahịa e-commerce, anyị nwere ike ịnye ọrụ dị mma ma dị mma. Ebumnuche anyị bụ ịkwado nchekwa nke azụmahịa ahụ. Anyị na-arụ ọrụ dị ka ndị ogbugbo n'etiti ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ere, anyị na-enyocha na ndị na-ebubata ya bụ ndị a tụkwasịrị obi ma anyị na-enyocha ụdị anomaly ọ bụla, ihe ndị dị iche na asọmpi ahụ.
AE: Ọmụmụ ihe na-egosi na B2B Online Commerce na Spain na-egosi na ndị na-arụrụ onwe ha ọrụ na ngalaba B2B na-arụsi ọrụ ike karịa Limitedlọ Ọrụ Na-adịghị Aru, na uto nke ọrụ ha n'ịntanetị ka ukwuu. Kedu ihe kpatara nke a, n'echiche gị?
LC: Obere ụlọ ọrụ na ndị nke ndị ọrụ onwe ha na ndị ọchụnta ego hibere nwere obere aha na ihe onwunwe ma e jiri ya tụnyere nnukwu ụlọ ọrụ na-achịkwa ahịa. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị nweere onwe ha na-atụgharị n'ahịa dị ka nke anyị iji ruo ndị na-ege ntị na ha agaghị erute n'onwe ha, ma si otú a nwee ike ịnye ndị ahịa ha teknụzụ dị elu na-enweghị mkpa itinye nnukwu ego. SoloStocks.com enyerela ọtụtụ ụlọ ọrụ aka ịre nke mbụ na onntanetị na ọbụna ịchọ ahịa na mba ndị ọzọ.
Ekwesiri ighota na ndi oru aka ha na ndi oru aka ha bu uzo di nkpa nke ahia Spanish; Ha bụ isi engine nke akụ na ụba na Spain, a na-eme atụmatụ na ha na-anọchite anya 95% nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ taa. Ya mere, ịrị elu nke ụdị ụlọ ọrụ a na Portal anyị, na-eduga ogo nke ụlọ ọrụ ndị kachasị nye ngwaahịa ha na ,ntanetị, na-egosi naanị usoro a.
AE: Dabere na ọmụmụ ihe ahụ, mbupụ ndị Spain rịrị elu site na 21%, ebe ọ bụ ebe bụ isi ha Latin America. Gịnị bụ isi ihe na mmụba a?
LC: Latin America bụ ahịa nwere mmekọrịta chiri anya na Spain yana nke ahụ na-enye ọtụtụ mmekọrịta maka mbupụ, ma asụsụ na ọdịbendị na n'ihi usoro mepụtara ha nwere maka azụmahịa na Spain.
Na mgbakwunye, afọ a ọnụ ahịa euro na dollar US adaala nke ukwu, nke riterela mbupụ ndị Europe na mba ndị nwere ego a, ma ọ bụ na-ebubata ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ sitere na mba nwere dollar US. Ọnụahịa maka ngwaahịa ndị Europe na-asọ mpi ugbu a karịa mgbe ọ bụla.
AE: Ngwaahịa ndị kachasị ebupụ bụ, dị ka ọmụmụ ahụ si dị, ndị dị n'ụdị igwe na akụrụngwa, ejiji, nri, ihe owuwu, na ụlọ na ogige. Kedu ihe ị chere kpatara ihe ịga nke ọma nke ngwaahịa ndị a?
LC: Ndị ụlọ ọrụ na mpaghara ọdịnala ndị a atụfuola egwu ịmepe ọwa ahịa ọhụụ. Hasntanetị egosiwo na ọ bụ ma ọ bụ karịa ịrụ ọrụ nke ọma isi iyi nke kọntaktị azụmaahịa karịa ọwa ahịa ndị mbụ.
E jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ si mba ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ China, nke na-agbasi mbọ ike ịbanye Spain, ụlọ ọrụ ndị Spain na-eme ngwa ngwa ma na-etinye onwe ha n'ahịa elektrọnik dị ka nke anyị. Anyị nwere ọtụtụ akụkọ ọma na-akwado usoro a.
AE: N'ụzọ na-akpali mmasị, ngwaahịa ndị ndị ọrụ na-achọkarị anaghị adaba na ngalaba kachasị ere. Gini mere i ji chee na ihe omuma ndi ozo banyere ekwentị, mbadamba na ihe ndi ozo, onyinye agbam akwukwo, ma obu siga elektrọnik bu ihe di otua na ahia ahia?
LC: Dabere na data anyị, ngalaba ọrụ ndị ama ama n'etiti ụlọ ọrụ ndị Spen kpebiri ịre ngwaahịa na ọrụ ha na arentanetị bụ igwe na akụrụngwa, ejiji, nri, ihe owuwu, na ụlọ na ogige (ya bụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ekpebi ree ahia gi n’Intanet bu akuku ndia. N’aka nke ọzọ, teknụzụ – mobiles, mbadamba na ihe ndị ọzọ metụtara ya, dị ka nseta ihuenyo, onyinye agbamakwụkwọ, ma ọ bụ sịga elektrọnik, tinyere ndị ọzọ, bụ ụfọdụ n’ime ngwaahịa ndị ndị ọrụ chọrọ kacha. Anyị na-ekwu maka ọkọnọ na ọchịchọ.
Ngwaahịa ndị a na-achọkarị na-adaba na ngalaba ndị nwere ọtụtụ ahịa, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ọnọdụ niile. Mgbe ụfọdụ, ngwaahịa na-ewu ewu ngwa ngwa nke na ọ na-esiri ike ịgbaso ihe a na-achọ. Ihe atụ kachasị ọhụrụ bụ Apple Watch Apple ọhụụ: ọ mepụtala ihe achọrọ n'etiti ndị ọrụ na Apple ma ọ bụ ndị fọdụrụ nke ndị na - emepụta smartwatch - ndị hụrụ ka ahịa ha na - abawanye n'ihi mmetọ oku - enweela ike igbo. Agbanyeghị, ọ bụ ọnọdụ dị nwa oge na nke dị mkpirikpi ruo mgbe ụlọ ọrụ buliri ijeụkwụ ahụ. N’ọmụmụ ihe anyị, na okwu banyere anwụrụ ọkụ elektrọnik, a na-ahụta mbido mbụ nke were otu afọ na ọkara bụ nke dị ugbu a na ndepụta nke ndị na-ere ahịa ọ bụla.
AE: You nwere ike ịnye anyị ụfọdụ ndụmọdụ bara uru maka ndị ahụ na-ere ahịa, ndị na-emepụta na ndị na-emepụta ihe na-emebebeghị ahịa e-commerce? Nwere ike ịnye anyị ọhụụ gị na ohere nke eCommerce na-enye ha?
LC: Ndụmọdụ kachasị mkpa m ga-enye ha bụ na iji merie ọha na eze na-azụta na itntanetị ọ bụ isi ihe iji guzobe mmekọrịta ntụkwasị obi. Otu n'ime brek nke ecommerce bụ enweghị nchedo na ntụkwasị obi, eziokwu nke amaghị onye na-ere ya n'onwe ya na enweghị ike imetụ ngwaahịa ahụ tupu ịzụta ya. Nke a na - eme ụfọdụ enyo enyo na nke onye zụrụ ya, nke a na - ekwusi ike ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ikpe nke aghụghọ ndị na - ebilite na netwọkụ. Yabụ, ụlọ ọrụ chọrọ ire n'ịntanetị ga-emerịrị ihe niile iji mepụta aha ọma. Gụnyere ntụgharị sitere n'aka ndị ahịa gị, onyinye ma ọ bụ baajị enwetara n'oge ọrụ gị ma ọ bụ inye nkwado ndị ahịa site na iji ọgwụgwọ ma ọ bụ ozi email kachasị nwee ike inyere gị aka na usoro a.
Otu ụlọ ọrụ na-ere ngwaahịa ya n'ọma ahịa dịka SoloStocks.com ga-abụ nke a na-ahụ anya, na-aga iwu na ajụjụ gị n'oge ma na-enye ọgwụgwọ dị mma, ebe ọ bụ na ọtụtụ ahịa kọmputa anyị na-enwekarị usoro nyocha nke ndị ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ajụjụ ọnụ nke Luis Carbajo, onye isi oche nke SoloStocks.com
Diego Pernambucano dijo
Ezigbo ajụjụ ọnụ. Daalụ maka ntinye
Zaghachi Diego Pernambucano
Daalụ maka ntinye. Ekele si Chile =)
Ndewo, ọ bụ oge nke atọ m abanye na weebụsaịtị a ma ekpebie m ịza ajụjụ.
hụrụ blog a n'anya. Kedu ihe ị na-eji? Ọ ga-amasị m iji ya maka saịtị m mana enweghị m ike ịhụ ya.
Ọ bụ ụfọdụ CMS dị ka Joomla?
Ọ bụrụ n’icheghị, enweghị m ike ịhụ ibe edokọbara ọhaneze dịka twitter
Echere m na ị kwesịrị inwe otu. Enwere m Facebook ebe ọ dị mfe iji
Morningtụtụ ọma bụ nke izizi m gara
ebe nrụọrụ weebụ a na m kpebiri ikwu okwu. hụrụ blog a n'anya.
Kedu ihe ị na-eji? Ọ ga-amasị m iji ya maka saịtị m
ma ị gaghị ahụ ya. Ọ bụ ụfọdụ CMS dị ka WordPress?
Ọ bụrụ n’icheghị, anaghị m ahụ ibe edokọbara ọhaneze dịka Digg echere m na ị kwesịrị
ọ bụla. Ekwadoro m Pinterest ebe ọ bụ na ọ dị mfe iji.
A mụrụ Deliberry, ikpo okwu mbụ n'ịntanetị nke zụtara ụlọ ahịa na 1 awa
Amazon na-akwụ ụgwọ na azụmahịa B2B ma na-ebupụta azụmahịa Amazon